Isithethi kunye noceba wewadi kwimfazwe yamagama malunga nenkqubo yebhunga – Grocott's Mail
You are at:Home»OUR TOWN»Municipality»Isithethi kunye noceba wewadi kwimfazwe yamagama malunga nenkqubo yebhunga
Isithethi kunye noceba wewadi kwimfazwe yamagama malunga nenkqubo yebhunga
By Rod Amner April 28, 2022 Updated: April 28, 2022 No Comments3 Mins Read
The Makhanda City Hall.
Nge OVAYO MILISA NOVUKELA
UCeba weDemocratic Alliance uGeoff Embling kunye noSomlomo woMasipala waseMakana uMthuthuzeli Matyumza baye baxabana malunga nenkqubo yeBhunga
U-Embling kutsha nje unike ingxelo kwiqela lakhe likaWadi 4 kaWhatsApp ukuba “akanathemba kwiofisi yeSithethi saseMakana, njengoko sithanda ukungayiphenduli imibuzo. USomlomo akazibandakanyi iziphakamiso esizingenisayo kwi-ajenda yebhunga”.
Ephendula, uSomlomo kaMakana uMthuzeli Matyumza uthe ukuba uEmbling akayithembi iofisi yakhe, “makanike izizathu ezibambekayo”.
Geoff Embling, Democratic Alliance, Ward 4.
U-Embling wakhalaza ukuba isindululo sokungamthembi uMphathi kaMasipala asizange sibandakanywe kwi-ajenda yentlanganiso yeBhunga kwinyanga ephelileyo. “Ibhunga alikwazanga ukuvota ukuba anqunyanyiswe na uMphathi kaMasipala. Ubophelelekile ngokusemthethweni ukuba [abeke isiphakamiso kwi-ajenda].”
UMatyumza uthe isindululo sokungathenjwa kukaManejala kaMasipala “siphambi kwexesha kakhulu kwaye sinethuba”
“Okuqulathwe kwesi sindululo sisisombululo sebhunga esithi igosa eliphendulayo (kweli tyala uManejala kaMasipala) malicacise ukuba sizifumana njani na izichaso ezintathu ezilandelelanayo kuMphicothi-zincwadi Jikelele,” utshilo uMatyumza.”
“Ngokungafaniyo noSodolophu kunye noSomlomo, abakwizikhundla zezopolitiko, uManejala kaMasipala uqeshiwe kwaye unamalungelo phantsi koMthetho weNgqesho, njengaye nawuphi na umsebenzi kumasipala,” utshilo uMatyumza.
Ukuba kukho umbutho wezopolitiko okanye umntu ofuna ukunqumamisa umanejala kamasipala, makalandele inkqubo yomthetho echanekileyo, utshilo uMatyumza. “U-Embling akaphumelelanga ekuqondeni ukuba zisebenza njani na iinkqubo zebhunga. Andazi ukuba ngamatyeli amangaphi simfundisa ngeenkqubo ezijmalunga nebhunga.”
Makana Municipality Speaker Councillor Mthuthuzeli ‘Mabhuti’ Matyumza. Photo: Rod Amner
“Silungiselele indibano nabaphikisayo sachaza ukuba okubhalwe kwesi sindululo sokungathenjwa akuzuxoxwa njengoko sijongela phantsi izigqibo zebhunga, kwaye mna, njengoSomlomo, andizukuvumela ukuba ibhunga lijongelwe phantsi. Ngoko ke, angeza eofisini yam sidibane, okanye sidibane kwiphepha-ndaba kuba u-Embling akazi nto ngoRhulumente,” utshilo uMatyumza.
Kodwa, u-Embling wabuza, “[USomlomo] ukuba sayilungiselela nini intlanganiso? Uthe uza kunditsalela ukuze athethe ngalo mba kodwa zange kwenzeke oko.”
“Kungenzeka njani ukuba kube phambi kwexesha ukucela ukuba [uMene] anqunyanyiswe ekubeni abe kwikomiti yophicotho-zincwadi, i-SCOPA nabanye bonke bevumelana ukuba akafanelekanga ukubamba i-ofisi yoMphathi kaMasipala. Izichaso zingqina oko, kwaye akukho nto ayithethileyo ebonisa ngenye indlela.
“Ityala lika-Eskom lisemva ngenxa yokuba uMasipala akayigcinanga le akhawunti ikhoyo ngoku, kwaye no-MM khange abenanto ayithethayo ngoko,” wongeze watsho u-Embling. “Kutheni uSomlomo eqhubeka ekhusela u-MM – kufuneka akhathazeke njengathi?”
“Ukungenisa iziphakamiso nemibuzo kwiBhunga ngundoqo wenkqubo yedemokhrasi. Ooceba bonyulwa ngabantu, kwaye iziphakamiso kunye nemibuzo abayingenisayo ibonisa izicelo zoluntu zeempendulo. Inxalenye yoluntu ibicela ukuba lo MM ukhoyo anqunyanyiswe, kwaye isindululo sibonakalisa oku.
“Ukuchonga kunye nokukhetha ukuba zeziphi na izindululo emazingeniswe kwibhunga kulawulo lozwilakhe kwaye akukho mgaqo-siseko. Kusenokuba yimfuneko ukungenisa isikhalazo kuMphathiswa weCOGTA, acele kwenziwe uphando.”
U-Embling uthe i-DA iphinde yafaka iziphakamiso zokuchasa ukuchongwa kukaceba ongenamava njengosihlalo weMunicipal Public Accounts Committee (MPAC) – “ikomiti eyongamele ebalulekileyo”.
“I-Ofisi kaSomlomo ayiphumelelanga ekubekeni ezinye iziphakamiso kwi-ajenda, ezifana nesiphakamiso sokuba iinkonzo zentlalontle zenziwe iyunithi yonyanzeliso lomthetho kamasipala kunye neziphakamiso kwiinkonzo zequmrhu. Ukuba imiba ebalulekileyo efana nale ayibekwanga kwi-ajenda yebhunga, utshintsho alunakuphunyezwa libhunga,” ubhale watsho u-Embling.
Ephendula uMatyumza uthe ukuthotyelwa komthetho ngumcimbi wenkundla. “Kuthe xa kuphakanyiswa lo mba, wawubhekiswe kwikomiti ejongene nesebe leenkonzo zoluntu. Ukuthi sisilele kuthetha ukuba [U-Embling] uthi i-ofisi kaSomlomo ayisebenzi ngokukuko, kwaye asiyi kuyithatha lula loo nto,” utshilo uMatyumza.
UMatyumza uthe “umkhwa wokwenza iziphakamiso kwintlanganiso yebhunga” awuzuvunyelwa.
UMatyumza uthe inkani ka-Embling ibonakaliswe kukusilela kwakhe ukuthobela isigunyaziso sokugonya seYunivesithi yaseRhodes, nto leyo ebangele ukuba u-Embling athintelwe ukuba angene ekhampasini. UMatyumza ukwathe iRhodes ikhuphe imbalelwano yezikhalazo ngaku-Embling ngenxa “yenkohlakalo egqithisileyo nendlongondlongo komnye wabasebenzi ababhinqileyo bolawulo eyunivesithi”
Ephendula, u-Embling uthe esi sityholo sibubuxoki ngokupheleleyo. “Ndiye kwenye intlanganiso eRhodes apho bacela khona isiqinisekiso sokugonywa kwam. Ndibaxelele ukuba, ngokomgaqo, andizimiselanga ukuwuvelisa nokuba ndigonyiwe okanye andigonywanga kuba omnye wabahlohli bam endibathandayo akahlawulwa [ngenxa yokuchasa kwakhe igunya levax].
“Ndabaxelela ngokuzolileyo ukuba kutheni ndingasivezi isiqinisekiso nokuba ndinaso. Umsebenzi waseRhodes ubhalele uMasipala esithi ndikrwada – andizange ndibekrwada.”
Previous ArticleWhat is the meaning of freedom?
Next Article Yenzani ilizwi lenu livakale ngolu hlaselo lwedemokhrasi